Home Property & Real Estate Page 5
(English text below) ရောင်းသူနှင့် ၀ယ်ယူသူများကြား ချိတ်ဆက်၀ယ်ယူနိုင်မည့် အွန်လိုင်း၀က်ဘ်ဆိုဒ်ဖြစ်သည့် MYANMARKT.COMကို ဧပြီလ ၂၃ရက်နေ့တွင် မြန်မာနိုင်ငံ၌ စတင်မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ MYANMARKT.COMတွင် ကုန်ပစ္စည်း ၀ယ်ယူခြင်း၊ ရောင်းချခြင်းများ ပြုလုပ်နိုင်မည်ဖြစ်ပြီး ရောင်းချသူများအနေဖြင့် မိမိ၏ ကုန်ပစ္စည်းကို အခဲ့ရောင်းချနိုင်မည့်အပြင် ၀ယ်ယူသူများမှာလည်း ၀န်ဆောင်ခပေးရန်မလိုဘဲ အဆင်ပြေလွယ်ကူစွာဖြင့် ၀ယ်ယူရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် Portal ဘက်မှ မည်သည့် ထုတ်ကုန်မှ ရောင်းချမည်မဟုတ်ခြင်း၊ ကော်မရှင်ကြေးပေးသွင်းရန် မလိုသည့်အပြင် ရောင်းသူနှင့် ၀ယ်ယူသူအကြားတွင်လည်း ၀င်ရောက်စွက်ဖက်မှုများပြုလုပ်မည်မဟုတ်ကြောင်း သိရသည်။ “ကျွန်မတို့ဝက်ဆိုက်ကဝယ်ယူသူတွေကို Free Delivery နဲ့ပို့ဆောင်ပေးမှာပါ။ ဒါက နှစ်ဘက်စလုံးအတွက်လည်း အဆင်ပြေတဲ့နည်းလမ်းတစ်ခု ဖြစ်သလို ဒီလို အခမဲ့ဝန်ဆောင်မှုကြောင့် ဝယ်သူတွေက ကိုယ်တိုင်လာဝယ်စရာမလိုသလို လိုက်လံပို့ဆောင်ပေးမယ့် Delivery တာဝန်ရှိသူတွေကလည်း...
(English text below) CHID Bank မှ အိမ်ရာချေးငွေရယူထားသူများအနေဖြင့် သတ်မှတ်ထားသည့် ရက်အတိုင်း ချေးငွေပြန်လည် ပေးသွင်းရန်အတွက် အခက်အခဲရှိပါက ပေးသွင်းရမည့်ရက်ကို ၁၅ရက် ရွှေ့ဆိုင်းပေးထားကြောင်း CHID Bank၏ ထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရသည်။ လတ်တလောဖြစ်ပွားနေသည့် COVID 19 ရောဂါကြောင့် အိမ်ရာချေးငွေ ရယူထားသူများအနေဖြင့် သတ်မှတ်ရက် မတိုင်မီ ပေးသွင်းရန် အခက်အခဲရှိနိုင်သည့်အတွက် နောက်ဆုံးပေးသွင်းရမည့်ရက်ကို ထပ်တိုး၍ ၁၅ရက် ရွှေ့ဆိုင်ျးလက်ခံပေးခြင်းဖြစ်ကြောင်း အဆိုပါ ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ပါရှိသည်။ ထို့ကြောင့် ချေးငွေရယူထားသူများအနေဖြင့် ဧပြီလအတွက် အိမ်ရာချေးငွေပေးသွင်းခြင်းကို သတ်မှတ်ထားသည့် ရက်၏ ၁၅ရက် နောက်ကျ၍ ပေးသွင်းရမည်ဖြစ်ပြီး အဆိုပါ ၁၅ရက်အတွက် နောက်ကျကြေးပေးသွင်းရမည်မဟုတ်ကြောင်း သိရသည်။ ယခင်က အိမ်ရာချေးငွေအတွက် ချေးငွေပြန်လည်ပေးသွင်းရာတွင် သတ်မှတ်ထားသည့်ရက်ကို...
Upscale Yangon real estate property Golden City has launchedaNew Year promotion campaign offering discounts on condominium units, to end March 31. With Phase 1 and Phase2now completed, Golden City has seven residential towers targeted at young professionals and families. The development features facilities includingaswimming...
Retired government employees can now apply for tenancy at the rental housing recently built by the Ministry of Construction in Dekhina Thiri Township, Naypyidaw, according to an announcement by the ministry. Eligible applicants are retirees in low pension income groups who do not own housing. The ministry will give priority...
Local real estate service website iMyanmarHouse.com on January 10 opened the country’s first real estate call center to provideawide range of real estate information to the general public. The call center aims to serve those looking to buy, rent, sell or leaseahouse, make long term investments in the real estate sector, apply for home loans...